Ma ogtahay xiliga uu ku egyahay xil-heynta hay’addaha Dastuuriga ah ee Dowladda oo Baarlamaanka uu ku jiro? – Kalfadhi
September 30, 2020 September 30, 2020 Hassan Istiila
Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 26-ka bishan September ansixiyey heshiiskii doorashada ee ay wada gaareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, maammul goboleeddada iyo gobolka Banaadir.
Heshiiska Baarlamaanka ay ansixiyeen ayaa dhigaya, si aysan u dhicin firaaq ku yimaado sharciyadda jiritaanka hay’adaha Dastuuriga ah ee Dawladda Federaalka; Baarlamaanka 10-aad oo awoodihiisa Dastuuriga ah u dhammaystirantahay ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la dhaariyo xildhibaanada loo soo dooratay Baarlamaanka cusub ee 11-aad ee Soomaaliya si waafaqsan Qodobka 60aad ee Dastuurka Faderaalka iyo wax-ka-beddelka lagu sameeyey Sharciga Lr. 20 ee 27.06.2016.
Shirciga waxaa uu sidoo kale dhigaa in hay’adaha kale ee Dastuuriga ah ee Dawladda Federaalka ay xilalkooda sii haynayaan ilaa iyo inta laga dhiso hay’ad walba hay’addii beddeli lahayd.